ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်သော နေရောင်ခြည်သုံး စွန့်ပစ်ဆိုလာပြားစက်ရုံ ထိုင်းတွင် တည်ဆောက်မည် ? - Yangon Media Group
ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်သော နေရောင်ခြည်သုံး စွန့်ပစ်ဆိုလာပြားစက်ရုံ ထိုင်းတွင် တည်ဆောက်မည် ?
ဘန်ကောက်၊ မေ ၃
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော နေရောင် ခြည်သုံးဆိုလာပြားများ ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံများ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက် ရန် လုပ်ငန်းရှင်များက စိတ်ဝင်စားနေကြသည်ဟု မေ ၃ ရက်သတင်းများအရသိရသည်။ အရှေ့ဖျား စီးပွားရေးစင်္ကြံစီမံကိန်းအရ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေရောင်ခြည်သုံးဆိုလာပြားများ တပ်ဆင်အသုံးပြုမှုများ ဖြစ်ထွန်းလာတော့မည် ဖြစ်သည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ က မိုးပျံအဆောက်အအုံများတွင် နေရောင်ခြည်သုံး ဆိုလာပြားများတပ်ဆင်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား များ ထုတ်ယူအသုံးပြုကြမည်ဖြစ်သည်။
နေရောင်ခြည်ခံဆိုလာပြား များသည် ဆီလီကွန်ဆဲလ်များက ဓာတုဗေဒကက်မီယံများ သုတ်လိမ်း ထားပါက ယင်းဆိုလာပြားများ အား ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဆိုလာပြားများသည် အနှစ် ၂ဝ အသုံးခံသည်။ ငါးနှစ်မှ ဆယ်နှစ်အတွင်း ဆို လာပြားများ ၁၈ သန်း(သို့မဟုတ်) တန် ၅ဝဝဝဝဝ အသုံးပြုရန်လို အပ်မည်ဖြစ်သည်”ဟု စက်မှုလုပ် ငန်းဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သွန်ဆိုင်းချာ ဝါလစ်မီချတ်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ယင်းစက်ရုံအား ချာချွန်ဆာ အို ဒေသတွင် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ပြီး စက်ရုံတည်ဆောက်မှုကုန် ကျစရိတ်နှင့် အသုံးပြုမည့် မြေအ ကျယ်အဝန်းပမာဏတို့အား ယခု အခါ တွက်ချက်နေပြီဖြစ်သည်။
”ဆိုလာပြားများပြန်လည်အ သုံးပြုနိုင်ရေးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ ၁ဝဝခန့်လိုအပ်နေပါတယ်”ဟု လည်း ဆက်လက်ပြောကြားလိုက် သည်။ ”စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအနေ နဲ့ ဒီစီမံကိန်းအတွက် ဘတ်သန်း ၂ဝ အသုံးပြုဖို့ ဘတ်ဂျက်လျာ ထားပါတယ်”ဟု ဆက်လက်ပြော ကြားလိုက်သည်။ ”၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တုန်းက နေ ရောင်ခြည်သုံးစွမ်းအင်ကနေ မဂ္ဂါ ဝပ် ၈၆ဝဝ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက် ၅၆ဝ၃၄ မဂ္ဂါဝပ် (၁၅ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြစ်ပါ တယ်”ဟု စွမ်းအင်ဝန်ကြီးက ထုတ် ဖော်ပြောဆို လိုက်သည်။ ၂ဝ၃၇ ခုနှစ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ အတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ၁၂၇၂၅ မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့် မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်”ဟု လည်း ဆက်လက်ပြောကြားလိုက် သည်။
Ref ; The Bangkok Post
အမေရိကန် သမ္မတကို အကာအကွယ်ပေးသူအဖြစ် ရှေ့နေချုပ် ဝီလျံဘား ဝေဖန်ခံရ
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်၏ အစ်ကို ကင်ဂျုံနမ်ကို လုပ်ကြံခဲ့သော ဗီယက်နမ်သူ လွတ်မြောက်လာ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ထုတ်နေ တဲ့ အခွေတွေကို Original အခွေ ဝယ်စေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နေဝင်း(Snare)
လမ်းမကြီးများနှင့် အမည်တပ် လမ်းမကြီးများရှိ အိမ်စီးကားများအတွက် တစ်နာရီ ကျပ်၂ဝဝ ကောက်ခံမ??
ယနေ့ယှဉ်ပြိုင်မည့် One Championship ပြိုင်ပွဲတွင် အောင်လအန်ဆန်-ဂယ်လာနီတို့ တွဲဆိုင်းအပြင် ဖိုးသော်န??
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် Miss International 2018 ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် မြန်မာကိုယ်စားပြုအလှမယ် မေယုခတ္တာ ?